ọnwa: December 2018
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Are you planning for the upcoming summer holidays and thinking of the itinerary? Ọ bụrụ na ị na-achọ a na-eri irè usoro maka gị ọzọ ụgbọ okporo ígwè njem, ejegharị ejegharị na ụgbọ okporo ígwè nwere ike ịzọpụta gị ego mfe. Na mgbakwunye, ma ọ bụrụ na ị na-aga n'ihi na ụgbọ okporo ígwè oche n'oge ntinye akwụkwọ,…
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Ọ dịghị onye maara n'ezie n'ezie na akụkọ nke French fries na France. Anyị nwere ike ghara ọbụna-n'aka ma ọ bụrụ na ha na-abịa site na France, na niile. Chere, Kedu?! Yeap, ị nụrụ na o ziri ezi – ma Belgians na French kwuru nri a, and they both have stories to…